Njani Ukuqonda i-Aries Indoda Budlelwane
I-Aries umntu ngokungagqibekanga uqinisekile, ukhangela okulungileyo kwaye angakudlakathisi ngokwasemzimbeni fit. Maninzi kakhulu ukuqinisekisa ukuba malunga yintoni abazithandayo. Nkqu kwi budlelwane, akasayi settle kuba nje malunga nantoni na. Kubonakala ngathi i-Aries umntu onomdla kuzo wandering ngaphandle endaweni settling phantsi. Iimfuno Aries umntu ingaba iselwa ethile xa kwi budlelwane. Yena ufuna yonke into ibe customized ngokwelizwi lakhe iimfuno. I-Aries umntu uza kufumana olugqibeleleyo thelekisa kuba kuye kwaye ade afike kuyo yonke enye, akasayi settle phantsi kunye anybody. Xa kwi budlelwane, Aries umntu absolutely selfless. Anikezele kuyo yonke kwi budlelwane kwaye xa nguye zinika yakhe anamashumi elisetyenziswa kwimifanekiso eboniswe eskrinini kwi-budlelwane, ngoko ke kubalulekile obvious okokuba uya kanjalo kuba ezama a iqabane lakho ngubani ilungele adapt kuthathelwa ingqalelo uhlobo i-Aries umntu. I-Aries abantu kusenokuba confusing ngamanye amaxesha. Ukuba baya kufumana zabo olugqibeleleyo thelekisa, ngoko ke baya kuba devoted omnye umfazi, okanye babe nokutya ezininzi ngesondo partners. Dating ayi yakhe indebe iti njengoko yena kakhulu impatient ukulandela dating imithetho. Abe nokufumana iimpendulo ezininzi partners ngexesha, kodwa xa yena meets kuwe, uya vula phezulu kuwe malunga zonke kubo. Xa kuqaliswayo, babe hamba ngokuchasene naye, kodwa ixesha elide iqhube Aries abantu kunye zabo umgaqo-nkqubo ukuvula incwadi zivela, njengoko ophumeleleyo. Uya kusoloko abahlala kwi edge kwaye kakhulu impatient. Nkqu xa nguye kunye umntu, uya kuba ukucinga yakhe elandelayo adventure okanye indawo ukuze abe hasn khange explored okanye ngesondo indawo ukuze abe hasn khange balingwe. Kwi-emva yakhe, ingqondo, uya isoloko ikhangela into entsha kwaye unexplored. I-Aries umntu kakhulu iqhotyoshelwe yakhe bachelorhood tag. Yena akuthethi ukuba ufuna ukunika phezulu kwayo nayiphi na ngokukhawuleza. Aries abantu ukuva ukuba bakhe bachelorhood ivumela kuye ukuba sizame izinto ezintsha lonke ixesha ngaphandle kwakhe bothering malunga nantoni na ongomnye. Ukho ngokwenene aphile xa ukho kuzo yakhe adventure indlela. Aries abantu baya zange urhwebo zakhe inkululeko kuba nantoni na ongomnye. Iya kuphela kwenza ukuba ke yena uziva ngathi usasebenzisa ukuba ubudlelwane, uya kufumaneka kwi-iya kubonelela naye bonke adventure nenkululeko ukuba ukho fond. I-namanani budlelwane kuba Aries abantu ufumana enye apho uya kunikwa zokhuseleko a budlelwane kwaye inkululeko bachelorhood. Ke kakhulu kakhulu ukuba buza kuba, kodwa eyona ndawo kukuba Aries umntu uya kuyigcina ikhangela ngayo kwaye izakuba ilungele settle phantsi kuphela xa unabo lonto. I-Aries umntu ubomi ubomi bakhe kwi carnival fairground apho lowo roams jikelele, ukuphumelela iimboniselo, enjoys ezahlukeneyo ride, kwaye jonga ezahlukeneyo ibonisa. Kwi budlelwane, Aries abantu dlala yi-kwezabo umthetho. Abakho enye abo ngolu hlobo lulandelayo eqhelekileyo ka-misela imithetho. Ukuba Aries abantu ufuna into ethile, ngoko ke baya uphumelele khange kuphumla de baya kuba kwenzeka okokuba. Abanye Aries umntu convinces umfazi zabo ubomi ukuya kuba i-vula budlelwane. Njani abo convince zabo umfazi yi kunzima ukusebenza ngokupheleleyo ezahlukeneyo ibali, kodwa ngenxa yokuba ihlala ukuba kokuba indlela yabo. Kubalulekile nto ngathi i-Aries umntu hayi wanikela uhlobo umntu, kodwa into kunye Aries umntu umele ukuba nkqu xa ngabo kwi budlelwane okanye atshate, baya musa engqondweni hanging ngaphandle nomnye umfazi. I-Aries umntu ingaba uthando ukutshintsha yakhe iqabane lakho, endaweni utshintsha iindlela zakhe. I-Aries umntu iqinisekile kwaye akuthethi ukuba unayo nayiphi na insecurity kwaye bengenako ingaba uya kuba ixesha kuba insecure umfazi. Ingqondo yakhe ngu wangaphambili uxakekile kunye iingcinga malunga ngesondo izikhundla, ngoko uyakwazi heave a sigh ka-uncedo xa ufaka ezingalweni zakhe. Kubaluleke ngenene nzima ukufumana ihamba kunye i-Aries umntu ngenxa yakhe wandering indalo. Akanguye ndonwabe kunye omnye umfazi. Yakhe personality ngu enjalo ukuba umfazi efumana attracted ngakulo Aries babantu, kwaye uya kwenza ukuqinisekisa ukuba bonke abafazi bakhe ngala ngokupheleleyo uvuma. Indoda chauvinist ngaba zikho, kwaye Aries abantu bamele olugqibeleleyo imizekelo chauvinist abantu. Yabo personality ngu enjalo ukuba baya kusoloko njenge ukukhokela kwaye kuba intloko usapho abo lugqiba ngokwakhe. Wathi ayikho enye abo uziva ngathi usasebenzisa compassionate okanye thoughtful malunga amalungu osapho. Aries abantu kufuneka iqabane lakho abo lilungile simlandele kwaye ngexesha elinye, ibe elizimeleyo socially kwaye financially.
Ukuba Aries umntu ngothando, ngoko ke uya kwenza oko obvious umfazi. Uya mhlawumbi kuba umntu ugcina kwi zilandelayo yakhe elonyuliweyo uthando okanye uya kuhamba absolutely cwaka. Yakhe ukuziphatha inika ngaphandle yokuba nguye ngothando kunye umntu. I-Aries umntu asukelwa ngokuthi u-extreme emotions, nokuba ukho ke bonke ngaphandle, okanye nguye ubambe yakhe emotions umva. Uya kuba ngokuzingisileyo kuzo bakhe indlela xa yena uzama ukuphumelela phezu uthando lwakhe xa ukho na malunga nemvakalelo yakhe. Ukuba akanguye na malunga yakhe emotions, ngoko ke uya kuba absolutely mum kwi-phambili yakhe umfazi. Yena uyaphulukana yakhe nako ukuthetha kwaye uba ulwimi iqinisiwe xa akanguye nako ukuqonda eyiyeyakhe emotions. Ukuba ufaka dating i-Aries umntu, ngoko ke lo mbuzo ingaba uqinisekile ukuba baphakame kwi-ingqondo yakho. Kufuneka ufake ngokwakho kwi tricky imeko yi-ecela ngokwakho lo mbuzo. Yakhe personality ngu enjalo ukuba uza kufumana kube nzima ukuba kumelana i-Aries umntu, kodwa uphumelele khange qiniseka yakhe inzala. Uphumelele ukuba baqonde ukuba ngaba ufuna enye yeentombi numerous conquests okanye ingaba yena fallen kuwe seriously. Kukho imiqondiso ukuba uza kukunceda ekuqondeni yakhe nzulu emotions. Yena phantse izenzo na ngesondo predator, abo uphumelele ukuba yeka ade abe ufumana i-olugqibeleleyo thelekisa. Ukuba wone ubeke phezulu chivalrous personality kwi-phambili wena bowled kuwe phezu nge bakhe umthetho, ngoko uyakwazi trust kuye. Xa yakhe personality ubonisa traits njenge ngokunyaniseka, nje, kwaye bravery, ngoko ke ukho umntu uyakwazi trust, okanye ufuna nje omnye bakhe abaninzi conquests. Umhlaba ngoku kufuneka funda indlela Aries mntu unako kuziphatha na predator kwaye siphathe ungathanda enye yeentombi conquests, kodwa kukho mhlophe icala kuye kakhulu. Nangona abe kufika kuwo njengoko umntu abo kuyanqaphazekaarely kulandela rulebook okanye usebenzisa ingqondo yakhe ukuba umthetho ebukekayo, kodwa xa yakhe kufutshane kwaye mhlekazi okkt basemazweni trouble, uya kusoloko kukho uncedo kwabo baphume le meko. Yakhe esinenkathalo personality trait iza ngaphandle kwi-vula kuphela xa yakhe wayemthanda okkt xa kufuneka yakhe inkxaso okanye uncedo. Hayi kaninzi uza kubona thambileyo kwlinye Aries umntu, kodwa oku kwicala lakhe personality kanjalo inhibits kwi umzimba wakhe. Kubalulekile kuyanqaphazekaarely ebonakalayo, kodwa xa yena iyathemba umntu, uya uphumelele khange babe neentloni ka-barfing kuyo yonke kwi-phambili kubo. Nomdla umfazi ngubani ethambileyo yayo kunye imigca enqamlezeneyo uza ukuqonda Aries umntu kwaye baya kunika naye sithuba ukuba lowo iimfuno. I-Aries umntu kwi company a Gemini umfazi uya kuxhamla nasiphelo incoko. Baya wokubopha yi-loluntu entanglements. Nangona abe athabathe amanye ixesha kokuthemba i-Gemini umfazi, kodwa ngokuqinisekileyo uya kuxhamla yakhe inkampani. I-Aries umntu Leo umfazi get ngaphandle ukuba i-amazing qala, kodwa midway ngokusebenzisa budlelwane, Aries wawulahla umphefumlo wakhe amandla. Ngumsebenzi unnecessary-imeyl ka-Leo umfazi ukuba ubeka i-Aries umntu absolutely ngaphandle i-ingoma. I-personality ka-Aries ngu charming, kwaye yena zange uyoyisakala ukutsala umfazi. Kodwa, ukuba umfazi akuthethi ukuba kuba passion okanye ayi isebenziseke ngokwaneleyo, wathi uphumelele ayikwazi kufumana kuwe irresistible. Unabo a conflicting personality ukuba uninzi abafazi ukufumana kunzima ukuqonda. Ngomhla we-nye esandleni sakho, ukhangela budlelwane kwaye kwesinye isandla, yena ufuna khawume yakhe universe. Xa kwi ubudlelwane kunye Aries umntu, bephethe ngomhla wakhe ingqalelo kwaye affection babe k ubonakala ngathi i-upheaval umsebenzi lowo olandelayo ukuba ukwenzeka, kodwa xa ufuna ngalo uxolo kunye kubudlelwane uza baqonde ukuba wone kuhlangatyezwana nazo zonke yakho ebelilindelwe. Njengokuba iqabane lakho, awunokwazi kuba onomona yakhe wandering indalo ngenxa ukuba ukho ezinzima malunga nani, ngoko ke uya kuba devoted kuwe. Lowo wenze yonke imiqondiso ukuba umfazi ikhangeleka kuba zabo iqabane lakho. Curb phantsi kwi jealousy kwaye uza kufika kuwo kakhulu ezilungele iqabane lakho kuba ubomi bakho. Akukho mfuneko kuba onomona xa lowo ngu-jikelele nabanye abafazi. Ukuba ukho kwi nani, ngoko ke uya kunika ngaphandle imiqondiso ukuba kuvavanya yakhe uthando kuwe. Ukuba wone wazisa ukuba usapho lwakhe kwaye wenza kuwe inxalenye yakhe umhlobo yenza isangqa, ngoko ke kubalulekile umqondiso ukuba ukho ngothando kunye nawe. Aries abantu bakho jikelele hayi onomona uhlobo maninzi ngaphezulu kwe protective zalo lonke udidi. Ngoko ke, ukuba ufuna ukubona ukuba ukho ukujonga emva kwenu kwaye unoxanduva ekubeni kuthathelwe care ngalo i-Aries umntu, ngoko ufuna ngokwenene ezikhethekileyo kuba kuye.
Lowo izakuba kissing kuwe kakhulu
Phakathi kwabo bonke izichazi, Aries ingaba notorious enye kwaye ifuna yesitalato intimacy kaninzi kwe-hayi. Uya kufumana ngaphandle izizathu ukuba asazanga kuwe kuphela xa yena thinks ufuna umntu othile. Aries umntu akuthethi ukuba ufuna vumelani yiya ngaphandle uthando lwakhe nanini kamsinya. Yena ufuna ukwenza kakhulu ke xa lowo ngu-jikelele yakhe yomdlalo. Yena uthanda yokuchitha uninzi ixesha lakhe kunye yakhe elonyuliweyo uthando. Xa ngothando, Aries mntu unako jika phandle kuba eyona iqabane lakho ehlabathini. Baya hlala kwi-touch ngokusebenzisa umbhalo xa abakho jikelele kuwe ngendlela umntu. Ezinye girls iya kuba onomona yakho Aries umntu ngenxa yokuba akukho ezinye imiqondiso kusebenza indlela i-Aries ingaba
← Saudi dating site - Free online dating kwi-Saudi Arabia
Njani ukwenza Umfazi ngothando kwaye Addicted: enzima unstoppable →